Ny tena olana dia betsaka ireo olona voa nefa tsy voatily, noho ny havitsian'ny fitiliana. Ary hatreto dia ambony be ny tahan'ireo voa izay voatily satria 41-48% n'ny olona tiliana dia voa avokoa, efa ho atsasany.
Ny fanadihadiana ihany koa dia ahitana fa 25% n'ny olona ihany no manaraka ireo fepetra fiarovana, geste barrière, ka mety mora hianaka amin'ny 80% n'ny mponina ny aretina.
Ny fitsaboana avy hatrany ireo marary any amin'ny CSB II dia mahomby raha voavatsy fitaovana sy fanafody avy hatrany izy ireny.
Raha oharina amin'ny any ivelany, dia mitovitovy ny fitrangan'ny valanaretina eto amintsika, saingy vitsy kokoa ny maty, fa ny fahitana ny fidangan'ny taha, dia mbola misy fivezivezen'ny olona avy aty amin'ny faritra efa voa mandeha any amin'ny faritra mbola tsy nisy, ary tsy voahaja ny geste barrière.
Raha ity fanadihadiana ity dia mbola atahorana ny fiparitahan'ny valanaretina raha milefitra amin'ireo fepetra fanakanana sy fiarovana isika.
Manolo-kevitra ihany koa ity fanadihadiana ity ny anomezana tosika ara-pitaovana sy fanafody ireo CSBII manerana ny Nosy, ary mampita ireo tarehi-marika marina mba ahafahana manara-maso ny fivoaran'ny valanaretina.
Mamerina ny fisaorana ireo Profesora mpitsabo nanome ny fandihadiana nataon'izy ireo.
(Sary notsongaina tao amin'ny fanadihadian'ireo profesora mpitsabo)